PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-24 - USOMAHLAYA EMDLALWENI OMUSHA
USOMAHLAYA EMDLALWENI OMUSHA
Ilanga langeSonto - 2017-09-24 - Izindaba - LWAZY MBUTHO
BAZOTHOBEKA izinhliziyo abathandi nabalandeli bakasomahlaya odumile, uceleste Ntuli ( osesithombeni), oshiye abalandeli bakhe bebuhlungu ngemuva kokushiya emdlalweni kamabonakude isibaya, okhonjiswa njalo phakathi nesonto ngokugamanxa kwehora lesi-8 ebusuku esiteshini esikhokhelwayo umzansi magic (161).
Uceleste ushiye kwisibaya ngoncwaba (August) ngoba efuna ukuqhuba umsebenzi wakhe wokuba ngusomahlaya. Kwenye inkulumo ekhethekile abe nayo nesiteshi somsakazo sasegoli, uthe uyabona ukuthi ukulingisa kuthatha isikhathi sakhe sonke kanti lokhu kulimaza ithalente lakhe lokwenza amahlaya ngoba ubengasakwazi ukwenza imicimbi, azungeze iningizimu Afrika, ahlekise abantu.
Phela le ntokazi iphume kwiSibaya sasala sikhala ngokuthi ngubani ozosishaya ngamahlaya. Ngemuva kokushiya kulo mdlalo, lo somahlaya uphinde wathola ithuba lokulingisa emdlalweni omusha obizwa ngelooking for Love. Useqalile ukuqopha kuwona njengoba uzoqala ukukhonjiswa kumabonakude ngonyaka ozayo.
Kulo mdlalo uzolingisa phambili indawo kabuyi Dube oyintombazane esencane kodwa ethanda kakhulu umsebenzi wayo futhi ezinikele kuwona. Ubuyi ufika egoli eyofuna umsebenzi kanti ungaphansi kwengcindezi yokuthola uthando lapho ontanga yakhe bonke beshada ngapha nangapha, yena akuthole kunzima ukubhekana nalokhu ngoba ufuna ukusebenza kanzima.
Uceleste kwenye ingxoxo uthe indawo azoyilingisa kulo mdlalo, icishe ihambisane ngqo nohlobo lomuntu ayilona njengoba naye empilweni yangempela engowesifazane osemncane ofike egoli eyosebenza. Uthi nakuba yena engafuni umshado kodwa kukhona izinto ezithi mazifane. Uveze nokuthi uyaqala ukuthola indawo lapho ezobe engumlingisi ohamba phambili.
Ilooking for Love wumdlalo ohlanganisa amahlaya nothando. Uzama ukukhombisa uhlangothi abantu abangacabangi ukuthi bangalubona othandweni nokunye okuningi. Lo mdlalo ubhalwe waqondiswa ngu-adze Ugah.
Phakathi kwabalingisi abaqavile kuwona singabala uphindile Gwala oke walingisa emdlalweni Umuvhango KWISABC 2, utrevor Gumbi naye ongusomahlaya, umlingisi osemnkantshubomvu kwezokulingisa, ulillian Dube yena ozolingisa indawo yokuba ngunina kabuyi. Masethembe-ke ukuthi le ntokazi yakwantuli izophinde isinikeze into emnandi ekulingiseni kwayo.
Phela kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi kukhona abalingisi abafike bakuthathe ngesikhathi ubabona okokuqala kuthi lapho sebenza omunye umsebenzi ugcine usizibuza ukuthi ngabe ngangithathwe yini ekuqaleni ngoba phela kayikho into eyisimanga lowo mlingisi ayenzayo.
Yebo ngiyavuma le ntokazi iyawashaya amahlaya futhi ngiyakholelwa ethalenteni layo kwezamahlaya, kodwa kwezokulingisa bengisazibonela usomahlaya nje. Masilinde sibone ukuthi uzobe esiphatheleni ngonyaka ozayo kulo mdlalo omusha.
Ukwenza kukaceleste kulo mdlalo yikhona okungenza ukuba aphinde athole elinye ithuba kweminye imikhiqizo yemidlalo kamabonakude. Uma izinombolo zababukeli balo mdlalo zikhombisa ukuthi abantu kabanandaba nawo (umdlalo) kungase kumbhedele ekulingiseni bese kuphoqeleka ngempela ukuba aphindele ngokugcwele emahlayeni.